Sary: Adrien Melvin
« Niezaka mafy izahay mba nanome hafaliana ho an'ny Malagasy rehetra », hoy i Adrien Melvin, mpiandry haraton’ny Barea an’i Madagasikara taorian’ny faharesen’ny ekipam-pirenena malagasy teo amin’ny ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika andirany faha-32, nanoloana an’i Tonizia. « Izay no vokatra, ny hoavy no banjinina ; Misaotra sy mankasitraka ho an'ny Malagasy rehetra », hoy izy nanohy. Rahampitso tolakandro no higadona eny Ivaro ny Barea an’i Madagasikara. Maneho ny faniriana i Adrien Melvin mba hampitaina mivantana amin’ny Televiziona Malagasy ny fahatongavan’ny Barea « mba ho hitan'ny rehetra manerana an'i Madagasikara ny firaisankinam-pirenena », hoy izy. (Jereo Sary Tohiny)
Nanao fanambarana tao amin’ny pejiny facebook ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, omaly, taorian’ny lalaon’i Madagasikara sy Toniza, teo amin’ny ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika. « Lavo isika fa tsy miondrika. Ary vao mainka hitraka hanandratra hatrany ny hambompom-pirenena. Misaotra anareo Barea, nitondra avo dia avo ny fanevantsika, nanoratra ny tantara ary nampiray fo ny Malagasy rehetra. Reharehan'ny firenena ianareo. Fandraisana anjara voalohany ho antsika tamin'ny CAN iny nefa nahavitantsika mihoatra lavitra noho ireo efa mpandray anjara hatrizay. Ho tohizantsika ny ezaka efa vita ary tsy maintsy hotohanana sy ho hatsaraintsika hatrany ny tontolon'ny fanatanjahan-tena. Tsy maintsy mitraka sy tafita i Madagasikara! ».
Hatrany Espaina ny mpankafy sy mpanohana Barea (Jereo Sary Tohiny)
Namoaka tweet niarahaba manokana an'ny Barea an'i Madagasikara ny filohan’i Kaomôro, Azali Assoumani, amin'ny naha tafakatra ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra ho amin'ny ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika. "Reharehan'ny aty amin'ny Ranomasimbe Indianina ianareo" hoy izy ka mirary soa amin'izay rehetra ho tohiny. (Jereo Sary Tohiny)
Nametraka « Ecran géant » eo amin’ny « Parvis » ny fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo hahafahan’ny besinimaro manaraka mivantana ny lalao ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra, hifandonan’i Madagasikara amin’i Tonizia anio alina. (Jereo Sary Tohiny)
Sary nalaina tamin'ny horonantsary amerikanina
Ny ambasadaoro Michaël Peter Pelletier mihitsy no mitarika ny mpiara-miasa ao amin’ny Masoivoho Amerikanina manao « Alefa Barea », ho fiaraha-mientana amin’ny fanohanana ny Barea an’i Madagasikara, hiatrika ny lalao ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra. Hikatroka ao amin’ny Kianja Al Salam ao Le Caire-Egypta, anio amin’ny 10 ora alina, ora eto Madagasikara, i Madagasikara sy Tonizia. Hifandona amin’i Sénégal amin’ny manasa-dalana izay tafavoaka mpandresy eo amin'ny 14 jolay ho avy izao. (Sary nalaina tamin'ny horonantsary amerikanina) (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Masoivoho Koreana Tatsimo
Andro miavaka ao amin’ny Masoivoho Koreana Tatsimo amin’ity anio ity. Miara mirona amin’ny fanohanana ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra, hiatrika lalao ampahefa-dalana anio alina ny mpiasa tarihin’ny ambasadaoro Lim Sang-Woo. Manako ny « Alefa Barea ». (Sary: Masoivoho Koreana Tatsimo)